Crypto Gaming: Iyo Sandbox uye Star Atlas inoita hombe bang game point board nemitambo yemavhidhiyo
Crypto mitambo: Iyo Sandbox uye Star Atlas inoita iyo hombe bang
Yakatumirwa ne Andre Volkman | Apr 30, 2022 | nhau, Vhidhiyo mitambo
Pamwe chete, Star Atlas neThe Sandbox vari kutora danho rekutanga mukugadzirisa kudyidzana kwemitambo pakati peEthereum neSolana blockchains. Star Atlas inotevera-gen Metaverse ine Triple-A mutambo dhizaini uye Unreal Injini 5 mifananidzo inofambiswa neSolana blockchain.
Iyo Sandbox, inotsigira yeAnimoca Brands, inotungamira yakasarudzika yemitambo metaverse yakavakirwa paEthereum blockchain. Iwo maviri metaverses arikuitisa makwikwi eStar Atlas VoxEdit, akavhurirwa kutumira kubva Chivabvu 2nd na2.00:16am (CET) kusvika Chivabvu 1 na59:XNUMXam (CET).
Iyo Star Atlas VoxEdit Contest inopa vatambi mukana wekuita senhume yemhando kubva kuSandbox, ichishanyira chimwe chemapoka matatu makuru egalactic muStar Atlas metaverse - iyo ONI, Ustur uye MUD. Vatumwa vanobva vapihwa basa rekunyora rondedzero yezvavanenge vawana. Vachishandisa Iyo Sandbox yemahara VoxEdit software, vanogadzira mufananidzo wemugari weboka. Vanokunda vachasarudzwa nezvikwata zveThe Sandbox uye Star Atlas. Zvabuda musarudzo zvichaziviswa musi wa 11 Chikumi. Iwo mana epamusoro ekupinda anogovera mubairo. Izvi zvinosanganisira zviuru makumi mashanu SAND, The Sandbox's in-game currency, uye boka revanochiva Star Atlas Starship NFTs.
BLOND:ISH inobatanidzwawo mumakwikwi eVoxEdit. Mugadziri, DJane uye anosimudzira activist atomiririrwa mune ese metaverses. Vatumwa vanoongorora iyo Star Atlas metaverse vanokokwa kuti vafemerwe nekurira kwavo kwepasi uye kugadzira musoro wenhengo yeboka reintergalactic Star Atlas nekuigadzira neVoxEdit. BLOND:ISH inobva yasarudza mupiro unogutsa. Zvinoverengeka Star Atlas spacecraft yakamirira anokunda mushure mekunge makwikwi avharwa musi waChikumi 11.
"Tinofara kuzivisa yekutanga yeakawanda-muchinjiro-chikuva kubatanidzwa kubatanidza ecosystems yeStar Atlas neThe Sandbox," akadaro Michael Wagner, co-muvambi uye CEO weATMTA, Inc., Star Atlas' primary development studio. "Isu tinogovana zvinangwa zvinoshuvira maererano nebudiriro yedu mukati memetaverse yakakura. Kudyidzana uku inguva yakakosha kwatiri tese kuratidza kugona kwekudyidzana kwese ari maviri emitambo nharaunda uye blockchain protocol. Mabhiriji atinovaka nhasi achashanda sezvivakwa zveramangwana mukuongorora zvisina mutsetse zviitiko zvisingaperi zvichagadzirwa nevagadziri venyika dzedhijitari mumakore anotevera. "
Star Atlas: Inotevera Gen Metaverse
Star Atlas ichizvarwa chinotevera metaverse icho chine chinangwa chekutora mukana we blockchain tekinoroji uye chaiyo-nguva yemifananidzo tekinoroji kugadzira isingaperi yemitambo chiitiko. Kubva gore rapfuura, kambani yakaburitsa akawanda akasiyana eNFT zvigadzirwa, zvinosanganisira zvinotamba nyeredzi, izvo zvakaunza Star Atlas pedyo nemadhora mazana maviri emamiriyoni ekutengesa kusvika zvino.
Semutungamiri wenyika yakasarudzika yemitambo muMetaverse, Iyo Sandbox inomiririra pfungwa yeMetaverse senzvimbo inoenderera, yakagovaniswa yedhijitari apo nyika dzakasiyana nemagamba anodhumhana kugadzira chiitiko chemashiripiti. Star Atlas inojoinha 200+ mubatanidzwa uripo unosanganisira Paris Hilton, Snoop Dogg, Adidas, Gucci, Warner Music Group, Ledger, HSBC, Ubisoft, The Walking Dead, Deadmau5, Steve Aoki, The Smurfs, The Care Bears, Atari, ZEPETO uye CryptoKitties. Vese vanotevera Chiono chechikwata cheSandbox chekuvandudza nekuwedzera Metaverse.
"Tinodada kubatana neStar Atlas uye tinotarisira kushanda pamwechete muzvirongwa zvitsva," akadaro Sebastien Borget, COO weThe Sandbox. “Makwikwi aya anoisa hwaro hwezambuko idzva rinobatanidza mametaverses. Chinangwa chedu ndechekugadzira mamwe ma-cross-platform ekubatanidza kune vese vateereri vedu. Hatina kumirira kuona kusikwa kunoshamisa kwenharaunda dzedu nemaziso edu!”
Star Atlas ine akati wandei makuru ekuburitswa akarongerwa 2022, kusanganisira yewebhu-yakavakirwa mini-mutambo uye Volant Studio Showroom. Iyi isoftware yekugadzira inoshandisa Unreal Engine 5's Nanite tekinoroji kuratidza bhaisikopo-mhando yevhidhiyo mutambo wemifananidzo. Iyo VoxEdit Contest ingori yekutanga yekubatanidza kwakawanda Star Atlas uye The Sandbox vakaronga kuvandudza kudyidzana pakati pemetaverse yavo uye anoenderana blockchains avakavakwa paari, kuitira bhenefiti yemetaverse ecosystem.
Razer DeathAdder V2 - Wired mutambo wembeva ne... * Parizvino hapana ongororo 29,19 EUR tenga
Kare Ravensburger: Nyowani app yeiyo yekare bhodhi mutambo wekirasi
Inotevera NuraTrue muyedzo: yechokwadi isina waya buds ine ruzha rwakapfuma rwemitambo mbozha
Muedzo weMigwagwa yeHasha 4: Kukudza kune mukurumbira kurova kwemakumi mapfumbamwe
WWE 2K22: Gameplay - anopfuura maminetsi mapfumbamwe!
Project xCloud muGermany: Maitiro ekutora chikamu mukutarisa